धेरै पारिश्रमिक लिने ५ नायिका: कसको पारिश्रमिक कती ? – Ramailo Sandesh
धेरै पारिश्रमिक लिने ५ नायिका: कसको पारिश्रमिक कती ?
पछिलो समय नै चर्चामा आएकी नायिका हुन् – प्रियंका । उनले अभिनय गरेका चलचित्र ‘नाइँ नभनु ल २’, ‘नाइँ नभनु ल ५’, ‘छक्क पन्जा’, ‘छक्क पन्जा २’, ‘छक्का पन्जा ३’, ‘ह्याप्पी डेज’, ‘कोहलपुर एक्सप्रेस ‘कथा काठमाण्डु’, ‘चंगाचेट’ लगायतका चलचित्र सुपर हिट भएका छन् । स्रोतकाअनुसार उनले प्रति फिल्म ९- १० लाख पारिश्रमिक लिइरहेकी छन् । तर पछिल्लो समय भने मुख्य भूमिकामा उनको डिमान्ड कम हुदै गएको छ ।
नम्रताले अभिनय गरेका नेपाली चलचित्र ‘सानो संसार’, ‘प्रसाद’ लगायत एक पछि अर्को चलचित्र सुपर हिट भएका छन् । उनले चलचित्र ‘प्रसाद’मा १५ लाख पारिश्रमिक लिएकी थिइन् ।
पछिल्लो समय म्युजिक भिडियोबाट चर्चामा आएकी नायिका स्वस्तिमा खड्का । उनका गीत एक पछि अर्को सुपर हिट भएका छन् ।उनीले अभिनय गरेका चलचित्रमा ‘छक्क पन्जा २’, ‘नाई नभन्नु ल ५, ‘जय भोले’, ‘बुलबुल’ लगायतका चलचित्र सुपरहिट छन् । स्रोतका अनुसार उनले १०- १२ लाख पारिश्रमिक लिन थालेकी छिन् ।
सम्रागी राज्यलक्ष्मी शाह
चलचित्र ‘ड्रिम्स’ बाट चर्चामा आएकी नायिका हुन् – सम्रागी राज्यलक्ष्मी शाह । उनले अभिनय गरेका चलचित्र ‘ए मेरो हजुर २’, ‘तिमी सँग’, ‘कायर’, ‘इन्टु मिन्टु लन्डनमा’ लगायत चलचित्र सुपर हिट भएका छन् ।सम्रागीले चलचित्र ‘इन्टु मिन्टु लन्डनमा’ मा १५-१६ लाख पारिश्रमिक लिएकी छिन् ।
नायिका पुजा शर्माले चलचित्र ‘अझै पनि’ बाट डेब्यु गरेकी थिइन् ।यस चलचित्रको सफलता पछि उनका चलचित्र ‘प्रेम गीत’, ‘म यस्तो गीत गाउँछु’, ‘राम कहानी’ लगायत ब्याक टु ब्याक सुपर हिट भएका छन् । पुजाले चलचित्र ‘पोई पर्यो काले’ मा २० लाख पारिश्रमिक लिएको चर्चा चलेको थियो ।
अमेरिकाको एउटा यस्तो गाउँ, जहाँ हरेक घरबाहिर हवाईजहाज हुन्छन् (भिडिओ)